Multi-paradigm: scripting, object-oriented (prototype-based), imperative, functional, event-driven
မေ ၂၃၊ ၁၉၉၅; ၂၅ နှစ် အကြာက (၁၉၉၅-၀၅-23)
Netscape Communications Corporation, Mozilla Foundation, Ecma International
ECMAScript 2016/ ဇွန် ၁၇၊ ၂၀၁၆; ၄ နှစ် အကြာက (၂၀၁၆-၀၆-17)
ActionScript, AtScript, CoffeeScript, Dart, JScript .NET, LiveScript, Objective-J, Opa, Perl 6, QML, TypeScript
↑ Flanagan 2011, pp. 1–2.
↑ Standard ECMA-262။ Ecma International (2015-06-17)။
↑ RFC 4329။ Apps.ietf.org။ 16 March 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 24 October 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ System-Declared Uniform Type Identifiers။ Mac OS X Reference Library။ Apple Inc.။ 2010-03-05 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၀၊ ၂၁:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။